musha Africa Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeMixed Martial Artist ine zita rekuti "The Style Bender“. Yedu Israel Adesanya Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva yehupenyu hwake husina maturo asi hunobudirira. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Israel Adesanya's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Israel Mobolaji Adesanya akazvarwa musi we 22nd waJuly 1989 kuLagos, Nigeria. Iye ndiye mukuru pane vana 5 akaberekwa naamai vake Taiwo Adesanya (mukoti) uye kuna baba vake Femi Adesanya (munyori wenhoroondo).
Israel Adesanya vabereki Femi naTaiwo.
Nyika yeNigerian neNew Zealand yeYoruba nedzinza reAfrica midzi yakave yakasimudzwa muguta reLagos nemhuri yake yepamusoro. Akakurira muguta racho semwana anofara pamwe chete nevakoma vake: Deborah, Samuel, David, uye Bolu.
“Ndakava neropafadzo yakakura kubva kumhuri yehupfumi. Kwandiri, hupenyu hwaitapira uye hwaive nyore munzvimbo iyo hupenyu hungave chero chinhu ”. Akaudza vatambi inzwi.
Mudiki Adesanya akaberekerwa mumhuri ine mari.
Paakanga achiri mwana, Adesanya aiva nerusununguko rwekuita nawo mumutambo chero upi zvawo wakasarudza uye akasarudza Taekwondo. Uyu wechidiki akadzidziswa mumutambo kwekanguva amai vake vane hanya vakamubvisa kubva pakudzidzira mushure mekunge akatsigira kukuvadzwa kwesimba rakaputsika.
Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Adesanya aiva nedzidzo yake yekutanga kana yekutanga kuChrisland School kuOpebi muIkeja, Lagos. Akazofambira mberi kusvika kuBells Secondary School kuOta muOgun nyika yekudzidzisa kwake kuchikoro chesekondari. Paakanga achiri mune zvikoro, Adesanya akaratidza kufarira pakati pezvigaro zvematongerwo enyika uye kutamba uye akawana kuwirirana kwemashoko kunobatanidza zvinhu zviviri.
“Ini ndakatanga kudzidza kutamba kubva kushamwari yangu kuchikoro. Ini ndaitandara nevatambi uye ivo vaizondiratidza mafambiro matsva. Ini ndaigona kuteedzera - Ndiri akanaka kopi. Uye zvinhu zvinoita kuti ndive murwi wandiri - zvemitambo, mutinhimira - zvinokodzera kutamba, zvakare ". Akabudisa pachena.
Adesanya akadzidza kutamba kuchikoro uye akabatanidza chiitiko neartial arts.
Izvozvo zvekare 12-makore akange asina kuitika kuchikoro chesekondari vasati vabereki vake vasarudza kubva kuNigeria vachitsvaga mikana yepamusoro yekudzidzisa vana vavo. Kutanga kumira kwaiva kuGhana apo mhuri yakapedza mwedzi ye10 inorema zvingasarudzwa pakati pekuenda kune imwe nyika kuU.SA mushure mekunge 9 / 11 kurwisa kana New Zealand.
“Gunyana 11, 2001, yaive nguva huru kuAmerica. Baba vangu vakafunga kuti US ichave iri muhondo munguva pfupi yapfuura, uye vaitaura chokwadi ”. Akatsanangura.
Mhuri iyi yakazopedzisira yasarudza kutamira kuNew Zealand uko kwavakaita musha wavo mutsva kuguta reRotorua kuchitsuwa chekuchamhembe kwenyika. Pasina nguva refu, Adesanya akanyoresa pachikoro chepamusoro cheRotorua Boy kuti apedze dzidzo yake yechikoro chepamusoro.
Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Yakanga iri kuNew Zealand uko Adesanya akagadzira izwi rekuti "Broken Native" zvinoreva kusanzwisisika. Chokwadi, murwi ari kusimukira akanzwa senge asinganzwisisike sezvo munhu wese waaiziva airatidzika kunge ari kutsika nzira yekufunda - zvimwe zvidzidzo uye kuwana basa rakazara rinobhadharwa.
Akasemeswa nekutsika nzira-senge mombe, Adesanya ane makore 19 akatsunga kudzikisa kudzidza nekuita zvido zvake muartial arts mushure mekunge aona bhaisikopo ra2003 Thriller / Action, 'Ong-Bak' mugore ra2008.
“Ndinoyeuka ndichiona bhaisikopo 'Ong-Bak', raitamba Tony Jaa. Aive achiita zvese izvi zvekupenga (expletive) uye ndakangofanana, '(expletive) - zvakanakisa. Ndinoda kuva murwi ”. Akabudisa pachena.
Adesanya akafunga kuti ave murwi mushure mekuona bhaisikopo 'Ong-Bak'.
Iye wechidiki akazviwana akadzidziswa Muay Thai kwegore uye akasindimara akapikisana nemurairidzi wake (Derek Broughton) anoda kuve neyekupedzisira uye yekupedzisira amateur MMA kurwa nemumwe Neroni Savaiinaea muna 2009. Kunyange hazvo Adesenaya akakundwa kurwa, haana kupotsa chidzidzo chechiitiko.
Mukufunga kumashure, ndinofara kuti kurwa kwekutanga kwakaitika nenzira yacho. Dai ndaikunda iyo kurwa, ndingadai ndakave senge, 'Ndini murume, ini ndiri (expletive) mukurusa, ini ndiri (expletive), hapana anogona kundibata'. Zvakandiratidza kuti ndaive nezvakawanda zvekudzidza muMMA, asi panguva imwe chete, handina kukuvara kana kutumirwa zvakaipa. Izvo hazvina kana kumbonditadzisa kubva kune basa mumutambo. Anobvuma.
Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Asingadzorwe nekurasikirwa kwake kwekutanga, Adesanya akatamira kuAuckland uko akazviisa pasi pekudzidziswa kwemudzidzisi mutsva Eugene Bareman. Adesanya aive asiri mweni kuna Eugene pamberi pekupedzisira vasati vamugamuchira kuti adzidziswe. Eugene aitova, pakona yaAdesanya panguva yake yekundikana amateur MMA kurwa uye akatsunga kusazomboita zvekuita nemurume akasindimara murwi. Nekuda kweizvozvo, Adesanya paakauya achitsvaga kurovedzwa kunhandare yeEuguene akaedza nesimba kuramba chikumbiro asi akazomugamuchira.
“Akambozeza pakutanga. Pamwe kwaive kupenga shure kune iyo yekutanga kurwa; 'Kwete iyi shit zvakare'. Akaedza kundibvisa, akaedza kunditungamira kune mamwe majimu. Ndakanga ndakafanana, 'Nah - ndakanaka pano chaipo. Apa ndipo pandiri kuda kuve ”. Adesanya yakazarurwa.
Israel Adesanya paCentral Kickboxing gym apo anodzidzisa nemudzidzisi Eugene Bareman (kuruboshwe).
Eugene akashanda naAdesanya kuti amubatsire kutonga zvinhu zvebhodhi uye kickboxing. Kunyange zvazvo Adesanya akanyora zvishomanana zvakarasikirwa mumitambo yehondo yakambotaurwa, akashanda zvakaoma zvikuru kuti arege kurasikirwazve pashure pokunge atanga mhizha yake yeMMA basa mu2012.
Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Adesanya yakaramba isingazivikanwe kunyangwe ichinyora 11-0 MMA inokunda pakati pe2012 kusvika 2017. Zvisinei, zvinhu zvakatora shanduko dzakasiyana muna Zvita 2017 paakasaina kuUFC. Mukati megore regore nemwedzi mishoma, Adesanya akazvimisikidza sechinhu chikuru chinotevera muUFC nekuwedzera zvinyorwa zvake zveMMA kusvika 16-0. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Adesanya akazvimisikidza kuUFC kwaanoramba ari asina kukundwa MMA murwi.
Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Ichitevera kukwira kwaAdesanya mukurumbira, vazhinji vanga vachishamisika kuti ndiani musikana kana mukadzi ari shure kwekubudirira kwake. Ehe, iye ane mweya wekukunda pamwe chete nekukurumidza kuwedzera net kukosha inoita kuti vakadzi vade kuve vake.
Zvisinei, Israeri inogona kunge isina kuroora sezvo pasina marekodhi ehupenyu hwehukama hwayo. Uye zvakare, ari kuita kunge akatarisana nekushanduka kubva pamwana mudiki kuenda kuna mambo mubhokisi reUFC.
Adesanya anogona kunge asina kuroora panguva iyi.
Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Adesanya akaberekerwa mumhuri ye7. tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve baba vaAdesanya: Femi Adesanya ndibaba vaIsreal. Ivo baba ve5 ndeye accountant uyo anobva kuOdogbolu, Ogun State, Nigeria. Femi anga ari wekutsigira kwakakura kumurwi kubva zvaakaita pfungwa yake yekuvaka basa muCompat mitambo.
Isreal Adesanya nababa Femi.
Nezve Amai vaAdesanya: Taiwo Adesanya ndiamai veIsrael. Kufanana naamai vazhinji, Taiwo amai vane hanya vasina kubvisa kuchengetwa kwaamai kubva kumurwi zvisinei nekuti akura nezera. Uye zvakare, ndiye ega mukadzi anogona kurova kutya muAdesanya kana kundiita kuti ndinzwe senge mukuru wenguva dzese.
Amai vaAdesanya Taiwo.
Nezve Adesanya's Siblings: Adesanya ane vana vomumhuri ye5 avo vashoma vanozivikanwa nezvimwe kunze kwekuti ivo vanoshanda sevanyori kana vanamukoti. Vanosanganisira 28 ane makore anonzi Deborah (mukoti) 26 wemakore ane makore Samuel (mukoti), 26 ane makore ane makore David (mubhadhadzi), uye 20 ane makore anonzi Bolu (mudzidzi).
Adesanya akagara nehama nehanzvadzi. Kubva kuna LR, Adesanya, David, Deborah, Bolu naSamuel.
Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Heano mamwe emashoko anonakidza anotsanangura hunhu hwaAdesanya.
Adesanya anoita unhu hunofadza kuburikidza nokutaura mazwi anokurudzira kwaari. Muitiro wacho wakagamuchirwa nemurwi panguva yekuchikoro chesekondari apo paakasarudzwa uye achishungurudzwa nevana vaduku kupfuura iye. Kutaura pamusoro pemutambo Adesanya anopa zano rokuti:
"Iwe haugone kuzvishora-wega apo vamwe vese vari kuedza kukuitira. Unofanira kukwanisa kutaura newe nenzira kwayo ”.
Anodada nemidzi yake yekuNigeria uye ane tattoo yeAfrica pamuviri wake neNigeria yakadomwa. Pamusoro pemepu pane zvakanyorwa kuti "Broken Native", rinobata rinomuyeuchidza nezve ake akasiyana.
Matato aAdesanya anoratidza kuziva kwake kumashure.
Adesanya ane rairo yakanaka yeChirungu, Pidgin Chirungu uye Yoruba mitauro. Pazasi pevhidhiyo inotora Adesanya ichiratidza kugona kwake mitauro yambotaurwa. Kiredhiti kuUFC - Yekupedzisira Kurwira Makwikwi.
Anoda uye anobvuma kuti zvokudya zvekuNigeria zvisipo zvakadai saSuya, Eba, mahema uye Efo Riro, Kilishi, Garri naKukukuli.
Adesanya haaiti chero chitendero chipi zvacho asi anokoshesa unyanzvi uye hunoshamisa mune zvitendero zvakasiyana. Maererano naye:
“Ini handinamata chero chitendero kana kutevedzera chero kodhi asi yangu. Ndine hunyanzvi hwepamoyo hwekukoshesa hunyanzvi uye zvimwe zvinhu zvakawanda kubva kuzvitendero zvakasiyana, tsika, mapoka… nezvimwe ”.
Israel Adesanya Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Untold Biography Facts
Adesanya ane bhandi rebhuruu muBrazilian Jiu-Jitsu. Aigona kunge akawanawo bhandi yeyero muTaekwondo achiri mudiki asi amai vake vakamukwevera kunze kwekudzidzira mushure mekunge atyoka ruoko.
Israel Adesanya ane Blue Belt muBrazillian Jiu-Jitsu. Credits: Graciemag.
Zita rake remadunhurirwa rekuti "Yekupedzisira Chimiro Bender" rakagadzirwa kubva kuTV show, Avatar. "Yekupedzisira Mhepo Bender" (Avatar) inoziva kutonga kwemoto, mvura, mweya nepasi. Saizvozvo, Adesanya ari pakutsvaga kugona zvinhu zvese zveartial arts.
Adesanya anozvifananidza neAvatar muAmerican animated akateedzana, Avatar: Iyo Yekupedzisira Airbender.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Israel Adesanya Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!